Font Embed problem in Unicode - Saturngod
Font Embed problem in Unicode
Posted on Updated January 7, 2011 January 4, 2011 by saturngod
ဒီနေ့ ရုံးမှာ MMUnicode Embed အတွက် ထပ်ပြီး update လုပ်ဖို့ စဉ်းစားမိလာတယ်။ မနေ့ညကတည်းက စဉ်းစားမိပေမယ့် ရေးဖို့က ပျင်းနေတယ်။ ရုံးရောက်တော့ လူပျိုကြီးကိုတော့ လှမ်းပြီး အကြောင်းကြားလိုက်သေးတယ်။ ကျွန်တော် ဒီနေ့ comment မှာ ဇော်ဂျီနဲ့ ရိုက်ရိုက် unicode နဲ့ ရိုက်ရိုက် ရိုက်လို့ရအောင် လုပ်တော့မယ်လို့။ တကယ်တန်းတော့ ကျွန်တော် ငပျင်းမို့ပါ။ comment တဲ့သူတွေက unicode နဲ့ ဖတ်ပြီး comment တာတွေကို ဇော်ဂျီ နဲ့ ရိုက်သွားတယ်။ ဒါနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြန်ပြောင်းရတာပေါ့။ အဲလို ပြောင်းရတာ ပျင်းလို့ comment ရေးတာတွေကို ဇော်ဂျီနဲ့ ရေးရေး Unicode နဲ့ ရေးရေး ရအောင် လုပ်မယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ထားတာ။
အဲဒီ one universe ကို comment ထည့်တဲ့ နေရာမှာ ထည့်လိုက်တော့ အဆင်ပြေသွားတယ်။ အခု comment တွေကို ဇော်ဂျီနဲ့ ရိုက်ထားလည်း submit လုပ်တဲ့အခါမှာ အလိုလို unicode ပြောင်းပြီး တင်ပေးသွားမယ်။ တကယ်လို့ unicode နဲ့ ရိုက်ထားတာဆိုရင်တော့ မပြောင်းတော့ဘူး။ ကြိုက်တဲ့နဲ့ ရိုက်ရတယ်။ comment လေးပေးဖို့ keyboard တွေ converter တွေ မလိုဘူး။ အလိုလို သိပြီး ပြောင်းအောင် ဖန်တီးပေးထားတယ်။ အဲဒါကိုလည်း MMUnicode Embed မှာ ထည့်ထားပေးတယ်။
အဲဒီ convert ကို စမ်းတာ လူပျိုကြီးနဲ့ ကိုဒီဘီကို ရုံးချိန်မှာ ခေါ်ပြီး စမ်းခိုင်းရတယ်။ firefox မှာ လုံးဝကို မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ firefox4မှာရတယ်။ chrome , opera, safari မှာရတယ်။ ကျွန်တော့် firefox မှာတော့ ရတယ်။ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ ဖြစ်နေတာ။ အိမ်ရောက်မှ code ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော် ထည့်ထားတဲ့ console.log(“some comment”); ဆိုတာ ကြောင့်မှန်း သိသွားတော့ အဲဒါလေး ဖြုတ်လိုက်တော့ အလုပ်လုပ်သွားရော။ အဲဒီ console.log လေးကို မတွေ့လိုက်တာ အချိန်တော်တော် ကုန်သွားတယ်။ လက်ရှိတော့ #comment နဲ့ #submit မှာပဲ ရေးထားတယ်။ template ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး နည်းနည်းကွာမယ်ထင်တယ်။ သို့ပေမယ့် ကွာနိုင်ခြေ နည်းပါတယ်။
နောက်ပြီး firefox mac version မှာ နားမလည်တာ တစ်ခုတွေ့တယ်။ Masterpiece font ကို local file ကနေ သွားမခေါ်ဘူး။ font embed ကြီးကိုပဲ သွားသွားခေါ်နေတယ်။ အဲဒီတော့ rendering အလုပ်မလုပ်ဘူး။ firefox mac ပြဿနာလားဆိုပြီး Arial font နဲ့ တခြား font embed တစ်ကို စမ်းကြည့်တယ်။ ပြဿနာမရှိဘူး။ local file ကိုခေါ်ပြီး အလုပ်လုပ်တယ်။ Masterpiece ကိုမှ အလုပ်မလုပ်ဖြစ်နေတယ်။ chrome , safari စတာတွေက local file ကိုခေါ်ပြီး အလုပ်လုပ်တယ်။ ဒါနဲ့ Mac verison, firefox font embed ကို ဖြုတ်လိုက်တယ်။
နောက်ထပ် RSS မှာ font embed ရမလား စမ်းကြည့်ဖို့။ အဲဒါကတော့ pulse မှာ စာတွေ ဖတ်လို့ရဖို့ပဲ။ pulse မှာ unicode ပြောင်းလိုက်တဲ့ site တွေ ဖတ်မရတော့ဘူး။ ဖတ်လို့ရမယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုခုတော့ ရအောင် လုပ်ရမယ်။ စဉ်းစားထားတာတွေ ရှိတယ်။ ဒီ လတော့ လုပ်နိုင်မယ်မထင်။ မအားတော့ဘူး။ မနက်ဖြန်ကစပြီး လုပ်စရာတွေ ပြန်လုပ်ရမယ်။ ဒီရက်ပိုင်း ကုဒ်လိုက်တာ တော်တော် အချိန်ကုန်သွားတယ်။ ဒီနေ့ ယူနီကုဒ် ဘယ်လို သွင်းရမလဲ ရေးဖို့တောင် အချိန်မရဖြစ်သွားလို့။ Keyboard နဲ့ font တွေကိုတော့ ညာဘက်က sidebar မှာ link တွေ ပေးထားပါတယ်။
« Add font embed in my blog Updated MMUnicode Embed »
ကိုစေတန်ရေ iphone မှာမြန်မာလို ဖတ်လိုမရသေးဘူး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ကူညီပါအုံး၊ရှမ်းစာလိုမျိုးဘဲပေါ်နေတယ်၊window မှာတော့ Yunghkio ကို install လုပ်ထားတော့
ကိုစေတန် blog ကိုဖတ်လိုရတယ်
Need iOS 4.2 to support font embed =(
This font looks cute. But does it still hv rendering issue? Below are how it looks on my Windows XP..
Before installing the Yunghkio font:
Chrome – http://img717.imageshack.us/i/saturngodchromewithoutf.jpg/
After installing the Yungkio font:
Chrome – http://img833.imageshack.us/i/saturngodchromewithfont.jpg/
Firefox – http://img141.imageshack.us/i/saturngodmozillawithfon.jpg/
only in font embed … are you install font ? let me check and I will fix tonight..
I know this issues. It’s only happening on Window :D.
I already told him to fix this issues. All you can freely point out the errors.
Yunghkio ကတော်တော်လှတဲ့ ဖောင့်ပဲ။ ကိုငွေထွန်းအဆိုအရ Yunghkio font ကိုရေးတဲ့သူက သူ့ဖောင့်ဟာ ယွန်းချိုလို့ အသံထွက်တယ်လို့ ပြောတယ်။
ဓနဂ္ဂ၊ သံယောဇဉ်၊ ဥက္ကာပျံ၊ ညဉ်းတွား၊ ဈာန်ရ၊ သြော်၊
အံ့သြော၊ အံ့အြော်၊ ၍၊ ဤ၊
ဟ အတော်ကောင်းတဲ့ ယူနီကုဒ်ပါလားဗျ။
Add font embed in my blog